Inkonzo yeprojekthi - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Inqaku Thetha kwiintengiso
Iikhamera ze-RIY ze-oblique
Imifanekiso ekumgangatho ophezulu, inamandla kwaye ithembekile kwimodeli ye-3D
I-D2M / DG3M yenkqubo yokumodareyitha yeelensi ezintlanu zekhamera ye-3D
I-D2Pros -Ikhamera ye-drone ye-oblique efanelekileyo kakhulu
Ikhamera ye-D2 / D3 -Ikhamera yeklasikhi ye-multi-rotor drone oblique
I-DG3 -Iyona khamera incinci ithandwayo kweyona APS-C incinci yekhamera ye-oblique
I-DG3Pros -Ikhamera ye-drone oblique efanelekileyo ye-APS-C
I-DG4Pros -Ikhamera ye-drone ye-oblique efanelekileyo kakhulu
Iikhamera ze-RIS oblique
ukukhanya kunye nokuncinci, ukuchaneka okuphezulu kwifoto ye-oblique
Iikhamera zeelensi ezingena-RIE
Ikhamera yobuchwephesha yokuchaneka ngokuchanekileyo kunye nokuchaneka okuphezulu
Izixhobo ezincinci, izinto ezinkulu
I-AP-1 Ipharamitha-Lungisa iModyuli
Imodyuli yokuGcina idatha ye-HS
M600pro intaba ezinzileyo
Icebo lokucoca ulwelo ngeSky-Software
Iskena sedatha yokuSkena idatha ngaphambili
I-Sky-target ye-AT Assignment Software
Iikhamera ze-RIY ze-oblique Iikhamera ze-RIS oblique Iikhamera zeelensi ezingena-RIE
Umenzi wekhamera omkhulu wase-China oblique owasekwa ngonyaka ka-2015, imvula ibijolise kwi-oblique
Eyokuqala ukumilisela iilensi ezintlanu zekhamera ye-oblique ngaphakathi kwe-1000g (D2), emva koko i-DG3 (650g), emva koko i-DG3mini (400g).
Ikhamera enye, iilensi ezintlanu. Olu manyano lukuvumela ukuba uqokelele iifoto kwiindlela ezintlanu kwindiza enye.
Funda ukusebenza kwimizuzu eli-10
Uyilo lweemodyuli lwenza kube lula nakubani na ukuba afunde ukufaka kunye nokusebenzisa iikhamera.
Umgangatho ophezulu womfanekiso kunye nokuchaneka
Ngokuzimeleyo kuphuhliswe ilensi yokubonakalayo eyakhelwe-ngaphakathi Gauβ kabini kunye nokusasazeka okongezelelekileyo okuphantsi kwelensi ye-Aspherical
Ixesha lokwahlula phakathi kweelensi ezintlanu lingaphantsi kwe-10ns.
Yomelele kwaye ikhuselekile
Iqokobhe elenziwe ngemagnesium-aluminium alloy lisetyenziselwa ukukhusela iilensi ezibalulekileyo, kwaye kuba
Inokudityaniswa kunye neendidi ezininzi zeedrones
Nokuba yi-UAV ejikelezayo, iphiko elingashukumiyo, okanye i-VTOL, iikhamera zethu zinokudityaniswa nazo kunye ne ...
Uphando / i-GIS
Ukuphononongwa komhlaba, uKhathuni, iTopographic, Ucwaningo lweCadastral, DEM / DOM / DSM / DLG
I-GIS, ucwangciso lweSixeko, ulawulo lwedolophu yedijithali, Ubhaliso lwearhente yokuthengiswa kwezindlu
Ulwakhiwo / iMigodi
ukubala komhlaba, umlinganiso wevolumu, ukubeka esweni ukhuseleko
Ukhenketho / izakhiwo zakudala ukhuseleko
Indawo ebonakalayo ye-3D, idolophu enophawu, umbono-wolwazi we-3D
Ezomkhosi / zamaPolisa
ukwakhiwa kwakhona emva kwenyikima, Ukucinga kunye nokwakhiwa kwakhona kwendawo yokuqhushumba, Indawo yeentlekele i ...
- KUTHENI RAINPOO
- Thetha kwiintengiso
Iprojekthi kunye namalungu eqela lenkxaso yezobuchwephesha anomyinge ongaphezulu kweminyaka emihlanu yamava kunye nendawo yokubhabha iyonke ngaphezulu kwe-1500 yeekhilomitha zesikwere. Ukuqinisekisa umgangatho weziphumo, sixhotyise abasebenzi beprojekthi nganye ngekhamera ye-oblique ephezulu kakhulu eveliswe yiRainpoo. Okwangoku, iqela lethu leprojekthi lenza iinkonzo ezinje nge-oblique yokufota ngenqwelomoya, ukulungiswa kwemodeli yedatha ye-3D, kunye nemodeli ye-3D eguqulwayo.
Ukuba uneeprojekthi ezinje ngeSaveyi / i-GIS / iSixeko esiSmart / uKwakha / iMigodiUkhenketho / ukhuseleko lwezakhiwo zakudala / Umyalelo ongxamisekileyo kwaye kufuneka wenze imisebenzi yokubonisa ye-3D, kodwa ungenazo izixhobo okanye amadoda anamava, sinokukunceda ugqibezele le misebenzi Ixabiso elifanelekileyo.
Sineklasta yekhompyuter eneekhompyuter ezingaphezu kwekhulu kwaye sinokuqhubekisa ngaphezulu kwama-500,000 ngexesha.
Ukuba awukwazi ukuphatha isixa esikhulu sedatha yefoto, ngesiseko sokuqinisekisa umgangatho kunye nokuchaneka kwemodeli ye-3D, sinokukunceda malunga nokuqhutywa kwedatha ngexabiso elifanelekileyo.
Inkampani yethu inesebe lenkxaso yezobuchwephesha bekhamera, ebunjwe ziinjineli zethu zenkxaso yobuchwephesha ezinamava. Amava enkxaso yamalungu angaphezulu kweminyaka emi-3. Emva kokuhanjiswa kwekhamera, inkampani yethu iya kuthi ibeke injineli yenkxaso yobuchwephesha kubathengi ukuba baqeqeshe ukusetyenziswa kwekhamera ukuqinisekisa ukuba abaqhubi banokuyisebenzisa ngobuchule ikhamera.
Ke ngoko, ukuba unengxaki yokusebenzisa ikhamera, isebe lenkxaso yezobugcisa linokubonelela ngeenkonzo. Ukongeza, umthengi ngamnye unomphathi wenkonzo yomntu omnye komnye. Ukuba uneemfuno zenkonzo yezobuchwephesha, ungasoloko unxibelelana nomphathi wenkonzo yabathengi, siya kukuvuyela ukukunceda.
Inkxaso yokuthengisa kwangaphambili
Samkela umboniso-isimemo kwihlabathi liphela.Ukuba unomdla kwiikhamera zethu ze-oblique, ungathandabuzi ukunxibelelana nathi kwaye ufumane ithuba ledemo.
Siyakholelwa ukuba iimveliso ezigqwesileyo kunye nabasebenzi abanamava banokubonelela ngeenkonzo ezifanelekileyo kubathengi bethu.
Amava omsebenzisi ebesoloko egxile kwiRainpoo. Ukuze uphendule ngokukhawuleza kwiimfuno zabasebenzisi, iRainpoo isete iseti yentengiso yasemva kokuthengisa, imeko kaxakeka kunye nexabiso elongeziweyo lokujongana neengxaki ezahlukeneyo ezingalindelekanga kunye nokuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi. Iqela lobuchwephesha lokugcina ikhamera, iqela lenkxaso yezobuchwephesha, iqela lokuvavanya ikhamera, ukuqinisekisa umgangatho ophezulu kunye nomgangatho ophezulu wekhamera nganye eveliswe sithi. Kungumsebenzi ongunaphakade weRainpoo ukubonelela abasebenzisi ngeemveliso ezilungileyo kunye neenkonzo.
Iikhamera ze-RIY ze-obliqueIikhamera ze-RIS obliqueIikhamera zeelensi ezingena-RIEIzixhobo
Uphando / i-GISISixeko esiSmartUlwakhiwo / iMigodiUkhenketho / izakhiwo zakudala ukhuselekoEzomkhosi / zamaPolisa
Iindaba eziManyanisiweyoIindaba Zoshishino
Imbali yeRainpooIgalari yozukoAmaqabane / Abahambisi
Kumgangatho we-14, No.377 Ningbo Road, Tianfu Area New, Chengdu, Sichuan, China
Inkxaso yaphesheya: +8619808149372
Ibhokisi yeposi: jack@rainpoo.com